ဘိုးအင်း - Rikoooo
TDS ဘိုးအင်း 787-8 GE က FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 17 120
Size: 56.8 ကို MB
FS787 ဘို့ TDS (Tenkuu Developers စတူဒီယို) ကအဆိုပြုထားဘိုးအင်း 8-2004 အလွန်ကောင်းတဲ့မော်ဒယ်, သင်သည်ဤ add-on အ 2D panel ကို (အဘယ်သူမျှမ VC ကို) ထုံးစံအသံ, ကာတွန်းမော်တော်ယာဉ်များ, ကာတွန်းတံခါးရွက်, ပြည့်စုံသော 2D panel ကိုလည်းပါဝင်သည်မှပျံသန်းရပါမည်။ ဒီဗူးလည်းမိမိအအမည်ပြောင် Dre အားဖြင့်လူသိများ6repaints.The ဘိုးအင်း 787, ပါရှိသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ TDS (Tenkuu Developers စတူဒီယို)
Posky ဘိုးအင်း 757-200 V1 သရုပ်ပြ FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 20 795
Size: 81.1 ကို MB
အပြီးအစီးဘိုးအင်း 757-200 ရှိုးတွေ့ဆုံနှင့်လေထုထဲတွင်ပါဝင်ဘို့ပြီးပြည့်စုံသော, FS2004 version ကိုသရုပ်ပြများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါအသံသိသိသာသာတစ်ဦးကိုမှန်ကန် B757 မှပြန်ထုတ်ပေးကြသည်။ အဆိုပါ 2D panel ကိုနှင့်ကို virtual လေယာဉ်မှူးအခန်းအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်နေကြသည်, bug တွေ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အထွာအတွက် fixed နှင့်ပြီ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ POSKY & Wilhelm Hudetz
Pushback ဘိုးအင်း 747-200v2 FS2004 များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 36 896
Size: 71.1 ကို MB
ဒီ Pushback အတှကျအဆငျသငျ့တစ်ဦးအပြည့်အဝဗားရှင်း "ဒုတိယအမျိုးဆက်ကျောင်းသားများ" ဖြစ်ပါတယ်။ Pushback အတှကျအဆငျသငျ့၏ဤ version ကိုဇွန်လ, 2004 အတွက်ထုတ်ပေး update ကိုပါဝင်သည်။ အ2doc ဖိုင်တွေဖတ်တာသေချာပါစေသူတို့တန်ဖိုးရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေးအဖြစ်သင်၏ desktop မှဆက်ပြောသည်။ Pushback ဗားရှင်း V2 များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီအရှိဆုံးအဆင့်မြင့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ Cl ဖြစ်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Vmax ပျံသန်းမှုစနစ်များ, Inc Ralph ရဲ့ Panel ကိုဆိုင်နှင့် Ralph L. Tofflemire
ဘိုးအင်း 747-100SCA + Navette Discovery FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 14 052
Size: 20.7 ကို MB
အဆိုပါ Shuttle Carrier လေယာဉ် (SCA) ကိုအာကာသ Shuttle သယ်ဆောင်ရန်ပြုပြင်ထားသောနှစ်ခုဘိုးအင်း 747-100 ၏နာမတော်သည်။ အဆိုပါအာကာသယာဉ်အကိုင်အတွက်ခံရမည်ကသိပ်ကြီးက SCA.These လေယာဉ်၏ခေါင်မိုးမှ fixed ဖြစ်ပါတယ်အဓိက Ke မှာသူတို့ရဲ့အာကာသဒုံးပျံပစ်လွှတ်ရန်သူတို့ရဲ့လေယာဉ်ကွင်းတပ်စခန်းကနေလွန်းရွှေ့ဖို့အသုံးပြုကြသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ စီမံကိန်းပွင့်လင်းက Sky + ကဲန် Mitchell က
ဘိုးအင်း iFly 747-400 FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 37 928
Size: 55 ကို MB
ဤတွင်နာမည်ကြီးရှုပ်ထွေးတဲ့အလွန်မြင့်မားအရည်အသွေး iFly ဘိုးအင်း 747-400 ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်ဤအတွက် add-on ရဲ့စာရေးသူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါမည်။ အသီးအသီးရွေးချယ်စရာလေယာဉ်မှူးအခန်းသို့မဟုတ်လေယာဉ်မှူးအခန်း / အခန်းလာနှင့်အတူအဆိုပါ 747, လက်တွေ့ကျကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ 8 ဗားရှင်းနဲ့အတူလာပါတယ်။ ဒါဟာသင်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲရှာတှေ့နိုငျသောအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးတစ်ဦးစုစည်းဖြစ်ပါတယ်။ compressed ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Jiangwei သူ Shen, painture: ဘိုယွမ်
ဘိုးအင်း Bombardier B52 D ကို Stratofortress FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 18 099
Size: 21.4 ကို MB
ဤတွင် B52 ဝမ်းနည်းစွာ, မိမိကိုမိမိ၏နေသော်လည်းနာမည်ကြီးပါ! အများအပြားကဖြစ်နိုင်သမျှဗားရှင်း။ အမည်မသိစာရေးဆရာမ။ လေယာဉ်မော်ဒယ်အလွန်ကောင်းမွန်စွာပြုကြ။ အဆိုပါအသံ Stratofortress မဟာဗျူဟာမြောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ်ဘိုးအင်းဘိုးအင်းအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဂျက်လေယာဉ်အင်ဂျင်က powered တစ် subsonic တာဝေးပစ်ဖြစ်ပါတယ် Roger.The ဘိုးအင်း B-52 အားဖြင့်တညျ့ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာ SER ၌ရှိ၏ ... ဆက်ဖတ်ရန်
KC-135T Stratotanker FS2004 Boeing HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 18 337
Size: 16.85 ကို MB
အရည်အသွေးနှင့်စုံလင်သောလေယာဉ်မော်ဒယ်၏လေယာဉ်ပျံ။ တဦးတည်း repaint နှင့်အတူကြွလာ။ အဆိုပါအသံထူးခြားသောအရည်အသွေးများမှာ! 41.5 မီတာ Wing Span: 39.9 မီတာအမြင့်: 12.7 မီတာ Wing ဧရိယာ: ဤ add-on.Length ၏စာရေးဆရာများမှကျေးဇူးတင်ပါသည် 226m, အများဆုံးမြန်နှုန်း: 980 km / h အများဆုံးအကွာအဝေး: 17'700 ကီလိုမီတာ, အမြင့်ထိပ်တန်း: 15.2 မီတာ, အလေးချိန် : 54 .... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Chuck အညစျအကွေး, ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ Dolenec, အန်းနာ Bartels Jean-ဆိပ်ခံတံတား
ဘိုးအင်း 707-200 Littoral လေကြောင်းလိုင်း FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 19 068
ဘိုးအင်းစီးရီးထဲကနေလေယာဉ်ပျံ။ ဒါဟာတဦးတည်း repaint ရှိပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ငအလွန် well.Sounds အရည်အသွေးကောင်းဖြစ်ကြ၏အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင် (ပြင်သစ်) Littoral လေကြောင်းလိုင်း၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဇာတ်လမ်းရှင်းပြပါတဲ့ link ကိုသည် http: //airways.angelfire.com/littoral-airlines.html ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ဂယ်ရီ Carlson
ဘိုးအင်း 767-400 အိမ်အရောင်များ FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 25 214
Size: 47 ကို MB
ဒီကျောက်မျက်ခံစားကြည့်ပါ! ကျနော်တို့ကအရည်အသွေးပိုကောင်းမတှေ့နိုငျတယျ။ တကယ့်ဘိုးအင်း 767-400 နဲ့တူလှပါတယ်။ အားလုံးအသေးစိတျပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ panel ကအလွန်လှပအလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအသံအလွန်လက်တွေ့ကျဖြစ်ကြပြီးသူတို့အတိအကျဒီလေယာဉ်ကိုမှလာကြ၏။ သင့်ရဲ့ဂရပ်ဖစ် configuration ကိုခွင့်ပြုလျှင်သင်အမှန်တကယ်eနိုင်ပါလိမ့်မည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ မော်ဒယ် et ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ProjectOpen က Sky, သားက de Warren
ဘိုးအင်း 777-300ER အိမ်အရောင်များ FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 19 468
Size: 15 ကို MB
(နောက်ထပ်တိုးတက်မှုများနှင့်အတူမူရင်း FS2004 အပေါ်အခြေခံပြီး) ထိပျတနျးမျိုးဆက်သစ်လေယာဉ်။ အများအားသတ္တုထင်ဟပ်, ကို virtual cockpit, ပြီးပြည့်စုံ panel ကအလွန်ကောင်းသောစတီရီယို sounds.The ဘိုးအင်း 777 သို့မဟုတ် 777 သို့မဟုတ် Triple ခုနစ်ပါးတစ်ဦးလေယာဉ် widebody, အကတည်ဆောက်ရှည်ခရီးရှည်သွားဂျက်လေယာဉ်သည်ခေါ်တော်နှင့်အတူ texture ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ မာရီယို Coelho
ဘိုးအင်း 767-300ER ပြင်သစ်လေကြောင်း FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 22 045
Size: 43 ကို MB
ခါတိုင်းလိုသကဲ့သို့, မြတ်သောအလုပ်အသင်း IFDG အားဖြင့်ပြုသောအမှု။ အဆိုပါမော်ဒယ်အသံအလွန်လက်တွေ့ကျဖြစ်ကြောင်းနှင့် panel ကိုအပြည့်အဝလည်ပတ်ပုံရသည်, လှပသောဖြစ်ပါတယ်။ စောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်တစ်ဦးကအလွန်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှု! အဆိုပါဘိုးအင်း 767 အမေရိကန်ကုမ္ပဏီဘိုးအင်းကထုတ်လုပ်မယ့်အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ်လေယာဉ်အမျိုးအစားရှည်လျားသောခရီးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ ma ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Equipment IFDG ...
ဘိုးအင်း 747-2U3B ဖူးခက်လေကြောင်း FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Downloads:9110
Size: 46 ကို MB
ထူးချွန်အရည်အသွေးပြည့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအဘို့တဖန်ဟာအလွန်ကောင်းတဲ့လေယာဉ်။ installation ကိုစဉ်အတွင်း, သင် install လုပ်နှစ်ခုဗားရှင်းအကြားရှေးခယျြနိုငျဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဖက်ဒါမှမဟုတ် right.Phuket Air လေကြောင်းလိုင်း (ဖူးခက်လေကြောင်းလိုင်း Co. , Ltd မှ) မှ panel ကိုအတူဗားရှင်း "ကိုပူးတွဲလေယာဉ်မှူးက" ရန် panel ကိုအတူဗားရှင်း "ကပ္ပတိန်" ဟုလေကြောင်းလိုင်းအခြေစိုက်ဖြစ်ပါသည် Bangk အတွက် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ စီမံကိန်း Opensky
ဘိုးအင်း 747-400 JAL Cargo FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Size: 39 ကို MB
ဒီနေရာမှာဓာတ်ပုံ-လက်တွေ့ကျကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူတစ် 747 Cargo ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအနီးကပ်အစစ်အမှန်တယောက်အားနဲ့ဆင်တူအလွန်လှပသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ panel ကိုနှင့်အသံများကိုအလွန်အောင်မြင်သောဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာကျနော်တို့အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအဖြစ်ရှာတှေ့နိုငျသောအကောင်းဆုံးတစ်ဦးစုစည်းပါ! ဒါကြောင့်လက်လွတ်မနေပါနဲ့ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်း International Co. , Ltd မှ .. (JAL) IATA: J ကို ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ မော်ဒယ်က de စီမံကိန်း Opensky ...
ဘိုးအင်း 737-800 Air လေကြောင်းလိုင်း Scheffel FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 33 530
Size: 33 ကို MB
ဘိုးအင်း 737-800 Air လေကြောင်းလိုင်း Scheffel အလွန်ကောင်းစွာအတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူများအတွက်စံပြကြောင်း version ကိုပြုမိသည်။ အမှန်မှာထို panel ကိုကြီးမြတ်သရုပ်မှန်သည်။ သင် screenshots.You မှမြင်နိုင်ပါသည်ကြောင့်ဂိမ်းရဲ့အစမှာကိုယ်တိုင်အင်ဂျင်စတင်အားလုံးအထက်ညွှန်ကြားချက်! Follow, မပွုပါမညျအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Arjan Scheffel အဲရစ် Cantu က de ပျံသန်းမှု-FX
ဘိုးအင်း 767-400 ကမ္ဘာ့ဖလားခရီးစဉ် FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 14 940
Size: 33,5 ကို MB
ဘိုးအင်း 767 400 ကမ္ဘာ့ဖလားခရီးစဉ်ခြွင်းချက်အရည်အသွေးတစ်ဦးလေယာဉ်၏! ပြင်ပမော်ဒယ်အမှန်တကယ်သူတော်ကောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အဖွဲ့က IFDG.The panel ကို၏မြတ်သောအလုပ်ကိုလည်းအထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အသိအမှတ်ပြု, အရာအားလုံး functional ပါ! သင် "Alt ကို" နှင့် "ကြည့်ရန်" ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် panel ကိုမှနောက်ထပ်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုအရေအတွက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ MODEL က de Albert BOUWMAN, texture က de Ben Jones